KHAYA PAGE ERCOLANI MONTEPULCIANO - Dura Ercolani Montepulciano
MONTEPULCIANO WINE Kambani Kambani
KHAYA PAGE ERCOLANI MONTEPULCIANOValentina2020-05-19T11:18:22+02:00
Kuda kwakatanga muna 1940 ...
Nhoroondo yemhuri Ercolani ndiyo nyaya ye cellarmen uye vintner vezvitoro uye zvido. Iyo inyaya yeavo vanoda nyika yavo uye nyika yavo vanoziva zvakavanzika, vanoonga zvinonhuwirira, ravira zvinwiwa.
ZVIITWA Uye BASA
Icho chitoro chakananga chezvigadzirwa zvekambani iri mukati me di di Gracciano muCorso 82 muMontepulciano. Pano iwe unogona kuwana waini, vin santo uye yakavakirwa waini, mafuta, truffles, salami uye rosehip ma berries.
Isu tinoita zvakare gadziriro yemabhasikiti uye emabhokisi ezvipo.
Puruzira mukanwa mako .. Ichi ndicho chishuwo chakakomba chemhuri Ercolani kuti mune hunhu Underground Guta zvirokwazvo kukushamisa nehuro!
Diki dzepachena dzakasununguka dzinogara dzichikugamuchira panguva yekushanya kwekuratidzwa kwechikafu chedu uye zvewaini zvigadzirwa nepo nekuda kwekuravira kwakanyanya, isu tinogona kuronga chaiwo kuravira nekuchengeta; zvakare nemapoka.
KUSHAYA UYE ZVOKUDZIDZA
Mhuri Ercolani inopawo mukana weemaexion uye kuyedza chikafu newaini zviitiko: kuravira kweVino Nobile di Montepulciano, grappas uye DOC vinsanti ine customizable sarudzo yenyama, cheki, mafuta newaini; kutungamirwa kushanya kwePasi pevhu Guta; nzendo dzekutsvaga tsvina; zviitiko zvekutora chikamu panguva yekukohwa; achiperekedza zviitiko mumaruwa nekushanya kune iyo nyika yekambani.
Chinotonyanya kufadza ndechekuti maziso edu haakwanise kuona.
Gara uchibatana nesu
53045 Montepulciano (SI): Basa rekuvaka rinoshanda
Runhare neFakisi: + 39 0578716764
Kubata maawa: Gara rakavhurika
kunze kwezuva reKisimusi
Ipa zita rizere
Kufambisa iwe kubvuma mutemo wepachena
PI 00755780525 - © Copyright 2019. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. - Powereb na Puntoweb Arezzo
Saiti ino inounganidza isingazivikanwe nhamba yedata pane yekufambisa, kuburikidza nemakuki akaiswa nemvumo yechitatu mapato.
Nekuvhara ichi mureza kana kudzvanya pane chero chinhu zvacho, unobvuma kushandiswa kwemakuki.